अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन वैध हुने पाँच दशक पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ। यस फैसलासँगै गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ।
अफगान भूकम्प: २८० जनाको मृत्यु, ६ सय घाइते
अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा २८० जनाको मृत्यु भएको छ भने थुप्रै घाइते भएका छन्।
भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी अस्पताल भर्ना
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भारतीय कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
नसीरुद्दीन शाह भन्छन्- अहिले शान्ति र एकताको कुरा गर्दा पनि जेल जानुपर्छ पैगम्बर मोहम्मदमाथि भाजपाका दुई पदाधिकारीको टिप्पणीले देशभर प्रदर्शन भइरहँदा अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले एक दिन मानिसले सत्य बुझ्ने र मुसलमान विरुद्धको ‘घृणाको श्रृङ्ंखला’ समाप्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले दिए राजीनामा श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा आङ सान सुचीलाई पाँच वर्ष जेल म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सैनिक सरकारले जेल सजाय सुनाएको छ।
पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिँदै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पाकिस्तानकाे संसद्मा केहीबेरमा मतदान हुन लागेको छ।
युक्रेन युद्ध र साना मुलुकलाई पाठ युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणले साना मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिकसँगै सामरिक दृष्टिले पनि कहाँ उभिने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन सचेत गराएको छ।
चीनमा १३२ जना बोकेको जहाज दुर्घटना चीनमा चालक दलका सदस्य सहित १३२ जना सवार जहाज दुर्घटना भएको छ।
रुसी आक्रमणबाट बच्न २५ लाख युक्रेनीले छोडे देश रुसी आक्रमणबाट बच्न २५ लाख नागरिकले युक्रेन छोडेर छिमेकी देशमा आश्रय लिन पुगेका छन्।
रूसमा भिजा र मास्टरकार्डको सेवा बन्द युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि दबाब दिन भिजा र मास्टरकार्डले रूसमा सेवा बन्द गरेका छन्।
युक्रेनका दुई शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा रूसी आक्रमणको दशौं दिन युक्रेनका दुई शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरिएको छ।
रूसी आक्रमणपछि १२ लाखले छोडे देश, युक्रेनी राष्ट्रपतिले अमेरिकी सिनेटलाई सम्बोधन गर्ने रूसको आक्रमणपछि १२ लाख युक्रेनीले देश छोडेका छन् भने अझै छिमेकी देशतर्फ जाने क्रम जारी रहेको छ।
रूसी आक्रमणपछि ५११ नेपालीले छोडे युक्रेन रूसी आक्रमणपछि ५११ जना नेपाली युक्रेन छोडेर सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेका छन्।
युक्रेनको आणविक केन्द्र रसियाको नियन्त्रणमा
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रसियाले आणविक आतङ्क फैलाउन खोजेको बताएका छन्।
युक्रेन छोडेका २४४ नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा
रूसी आक्रमणपछि युक्रेन छोडेका २४४ नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ।
युक्रेनले कसरी प्रतिरोध गर्दै छ रूसी आक्रमण?
रूसले चौथो दिन पनि बिहानैदेखि आक्रमण जारी राखेको छ भने युक्रेनले डटेर सामना गरिरहेको छ।
युक्रेनमाथि दोस्रो दिन पनि रूसी आक्रमण रूसले दोस्रो दिन पनि युक्रेनमाथिको आक्रमण जारी राखेको छ। बिहानैदेखि युक्रेनको राजधानी किइभमा आक्रमण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न आग्रह युक्रेन-रुस तनावपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
युक्रेनमाथि रूसको सैन्य आक्रमण रूसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण शुरू गरेको छ। बुधबार बिहानैदेखि युक्रेनको राजधानी किइभमा विस्फोट हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
को हुन् जापानले सम्मान गर्न लागेका दागो छिरिङ? भुटानका पूर्वगृहमन्त्री दागो छिरिङ तीन दशकअघि १ लाख ३० हजार नेपालीभाषी भुटानीलाई देश निकाला गर्ने प्रमुख पात्र र योजनाकार हुन्।
स्वीट्जरल्यान्डको अदालतद्वारा लाइबेरियाका विद्रोही कमान्डरलाई ‘युद्ध अपराध’मा २० वर्ष जेल सजाय स्वीट्जरल्यान्डको एक अदालतले शुक्रबार पश्चिम अफ्रिकी देश लाइबेरियामा भएको गृहयुद्धमा विद्रोही कमान्डरलाई बलात्कार तथा हत्या जस्ता ‘युद्ध अपराध’मा २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
भारतीय सैनिक महिला प्रहरीमा नेपाली पनि भर्ना हुन पाउने भारतीय सैनिक महिला प्रहरीमा नेपाली महिलाले पनि भर्नाका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन्।
भारतमा चार लाखबाट ६० हजारमा झरे संक्रमित भारतमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण हुँदै गएको छ। गत ७५ दिनयता सबैभन्दा कम संक्रमित देखिएका छन्।
साहित्यमा प्यालेस्टाइन-पीडा : 'उनीहरू मूलपाठ, हामी फूटनोट' ऐतिहासिक आधारमा एघारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि बसोबास गरेका हालका प्यालेस्टिनीलाई भूमिहीन र राज्यविहीन बनाउनु कुन मानवीयता हो? यदि यही दलिलको सहारा लिएर ऐतिहासिकताको दाबी गर्ने र अर्को पक्षलाई बहिष्करण गर्ने हो भने त संसारभरका कुनै भूगोल पनि चोखो रहनेछैन, हालको बहुल समाजको आकार र नक्शा पनि सग्लो रहनेछैन।